Nzọụkwụ Asaa na Akụkọ Zuru okè | Martech Zone
Otutu ahia na ire ahia na-adabara ndi na-ege gi ntị na onodu obi. Akụkọ akụkọ bụ isi nke ịkọwa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Therkọ banyere atụmatụ na uru bara uru, ma ọ gwụla ma mmadụ nwere ike ịmata na ị na-edozi nsogbu dị ka nke ha, ikike ha nwere ịtụkwasị gị obi nke ga-atọghata bụ ogologo oge.
Akụkọ akụkọ bụ ụdị nka - ọbụlagodi mgbe ọ na-eso ndị na-ege gị ntị kerịta akụkọ. Ike ịkọpụta ihe akụkọ na ntinye blọgụ ma ọ bụ ọbụlagodi obere vidiyo chọrọ ụfọdụ isi. Na Association Azụmaahịa Ọdịnaya emeela ihe omuma a iji nyere gị aka ịkọ akụkọ ọzọ gị. Mee ya taa!
Site na nhazi na nkata nye ndị dike na ndị odide, akụkọ gị ga-enwerịrị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ ga - ejikọta onye na - agụ ya. Soro ntuziaka anyị na ịga nke ọma ịkọ akụkọ.
Tags: cmamkpakọrịta ahịa ọdịnayaibéakụkọịkọ akụkọ